Musharixiinta madaxtinimada Hirshabeele oo maanta khudbadahooda jeedin doono (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Musharixiinta madaxtinimada Hirshabeele oo maanta khudbadahooda jeedin doono (AKHRISO)
Iyadoo maalintii shalay ay ahayd in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele ayaa arrinkaasi dib u dhac ku yimid, kadib markii ay soo baxeen faragelin iyo musuq maasuq baahsan oo ay madaxtooyadda Soomaaliya ku hayso arrimaha doorashooyinka maamulkaas.
Qaar ka mid ah musharixiinta u tartameeysa xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele ayaa dhawaan ka digay in doorashada maamulkaasi la musuq-maasuqo islamarkaana ay madaxtooyadda Soomaaliya lacago badan ku bixiso shaqsi gaar ah, si uu doorashada ugu soo baxo.
Hase ahaatee, waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe uu ka furmo kulan ay xildhibaanada cusub ee maamulka Hirshabeele uga dhageysan doonaan khudbadaha musharixiinta u tartameeysa xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas, kuwaas oo ka warbixin doonna qorshohooda doorasho.
Musharixiinta u tartameeysa xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele ayaa waxay yihiin ilaa seddax musharax, waxayna yihiin sida soo socota:-
3- Cali Maxamuud Caraale.
Sidoo kale waxaa xilka madaxweyne ku-xigeenka u tartami doonno laba musharax oo kala ah Cali C/laahi Xuseen (Guudlaaye) oo haatan ah gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe, iyo sidoo kale Cali Xasan Taakoow oo isna ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Sh/dhexe.
Dhamaan musharixiintaan ayaa maanta hortagi doonno xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Hirshabeele, iyagoona kadib halkaasi kusoo jeedin doonno qorshohooda siyaasadda oo ay xildhibaanada ku qanci karaan.
Warar hoose aynu heleyno ayaa sheegaya in madaxtooyada Villa Soomaaliya ay dhaqaale adag ku bixin doonto sidii uu madaxweynaha maamulka Hirshabeele ku noqon lahaa Siyaasiga Cali C/laahi Cosoble oo haatan gacan-saar dhaw la leh madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Mushaxa kale ee Maxamed Cabdi Waare oo isna u muuqda shaqsi isku haleynaya urur goboleedka IGAD ayaa wal-wal aad u weyn ka qaba in dowladda federaalka ay sameeyso wax isdaba marin iyo musuq-maasuq, waxaana arrinkaasi hore uga digay siyaasiyiin kale oo caan ah.
Ugu dambeyntii, maalinta berri oo ay taariikhdu ku beegan tahay 17-ka bishaan ayaa la filayaa inay magaalada Jowhar ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeele, iyadoona maanta lasoo gaba-gabeyn doonno dhageysiga khudbadaha musharixiinta xilalkaasi u tartameeysa.